ဆာလ်မွန်ငါးအသားလွှာ ၁၅ ကျပ်သား
တာရီယာကီ အရသာ ဆော့စ် ၅ စွန်း
သံလွင်ဆီ ၂ လ္ဘက်စွန်း
သဘာဝဒိန်ချဉ် ၁ စွန်း
မရောနိစ့်အနှစ် ၁ စွန်း
ဒါ့ရှိ ငါးအရသာမှုန့်၁ လ္ဘက်စွန်း
ဂျပန်သခွားသီး ၁ လုံး
မုန်လာဥနီ ၁ လုံး
ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီး ၅ လုံး
ငရုပ်ပွဝါ ၀.၅ လုံး
ငရုပ်ပွစိမ်း ၀.၅ လုံး
၁ ။ ဆာလ်မွန်ငါး အသားလွှာ ကို တာရီယာကီ အရသာဆော့စ် နှင့် အရသာ သွင်းပြီး ၃ မိနစ်ခန့် နှပ်ထားပါ။
၂ ။ ဂျပန်သခွားသီး ၊ မုန်လာဥနီ ၊ ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီး ၊ ငရုပ်ပွဝါ ၊ ငရုပ်ပွစိမ်း နှင့် ကြက်သွန်နီ တို့ ကို အံစာတုံးပုံ လှီးဖြတ်ပြီး သဘာဝဒိန်ချဉ် ၊ မရောနိစ့် အနှစ် ၊ သံပုရာရည် ၊ ဆား ၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် ၊ ဒါ့ရှိ ငါးအရသာမှုန့် ၊ ပူစီနံရွက် အနည်းငယ်တို့ နှင့် ရောသုပ်ပြီး ဆလပ်ရွက် ခင်းရျွ် ထည့်ထားပါ။
၃ ။ ဒယ်အိုး တွင် သံလွင်ဆီ ၁ လ္ဘက်စွန်းကို အပူပေးပြီး အသင့်အရသာသွင်းထားသော ဆာလ်မွန်ငါး အသားလွှာ ကို အိုးကပ်ကင် ထားပါ။
၄ ။ ဆာလ်မွန်ငါး အသားလွှာ အနံ့ အရသာ နှင့် ပြည့်စုံစွာကျက်လျှင် အသင့်သုပ်ထားသော ဒိန်ချဉ် မရောနိစ့် သီးရွက်စုံသုပ် နှင့် တွဲဖက်ပြီး တာရီယာကီ အရသာ အနှစ် ၊ သံလွင်ဆီ ၁ လ္ဘက်စွန်းခန့် ကိုဆမ်းရျွ် သံပုရာသီးတစ်စိပ် နှင့် အလှဆင်တည်ခင်းပါ။
Salmon Fillet 240 g
Teriyaki Marinate5tbsp
Japanese Cucumber 1 number
Cherry Tomato5number
Yellow Bell Pepper ½ number
Green Bell Pepper ½ number
Mint Leavesalittle
Lettucealittle
Marinate the Salmon Fillet with Teriyaki Marinate Sauce and put aside for3minutes.
Japanese Cucumber, Carrot, Cherry Tomato, Yellow Bell Pepper, Green Bell Pepper and Onion cut into cubes and mix with some Yoghurt, Mayonnaise, Lime Juice, Salt, Crushed Black Pepper, Dashi Powder and some chopped Mint Leaves and place on the bed of Lettuce.
Heat up the Pan with 1 tsp of Olive Oil and pan grill the marinated Salmon Fillet until tender.
When Salmon Teriyaki get flavor and tender, serve with Yoghurt Mayonnaise Salsa and pour 1 tsp of Olive Oil and some Teriyaki Sauce and garnish with Lime Wedge.